ခြားနားသူ: ရင်ဘတ်ထဲက ရဲဘော်ကြီး
သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးတနေရာ။ …… လူနှစ်ယောက် သံလွင်မြစ်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်၊ သံလွင်မြစ်ကြီးက တသွင်သွင်စီးဆင်း နေသည်၊ တချက်ချက် ဝေါကနဲ၊ ဝေါကနဲ မြည်သံကြားနေရသည်၊ လရောင်နှင့် ရေအလျင် ဆုံမိသွား သဖြင့် ရေပြင်ပေါ်၌ တဖြတ်ဖြတ် နှင့် ငွေကြယ်ပွင့်ကလေးများ ကွန့်မြူးနေသည်ကို ထိုသူနှစ်ဦးက ကြည့်နေမိသည်၊ မြစ်ပြင်ပေါ်မှ ဖြတ်တိုက်လာသော လေနုအေးလေး က အနာဂတ်အတွက် ကြံဆနေသော ထိုသူနှစ်ဦးကို ပွေ့ဖက်နေသည်နှယ်၊ မြစ်ကမ်းနဘေးတွင်မူ ရေအားကြောင့် ယိမ်းထိုးလှုပ်ခါ နေသော မိုးမခပင်များ၊ မိုးမခပင်ကို နှစ်ဦးသား သက်သေပြုနေကြသည်၊ "မိုးမခပင်တွေ … ဒို့ … သက်သေတည် … စိမ်းလဲ့သော အင်းလျားကန်သာမြေ"။
တချက်တချက်ဝေါကနဲ၊ ဟဲကနဲ မြည်ဟည်းသံကြားထဲမှ သူပြောလာမည့်စကားများကို ငံ့လင့်နေမိသည်၊ "သူငယ်ချင်း ငါတို့ အခြေခံဒေသ တခုရှိဖို့လိုမယ် ငါတော့ ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကို ဇောက်ချလုပ်တော့မယ်။ အဲဒီတော့ ဒို့ကလူထု ရှိရာကို သွားကြရမယ်"။ ထိုအတွေးခေါ်တရပ်ကို သူ့ထံမှကြားရသဖြင့် အံ့သြသွားမိသည် လူထု၊ အခြေခံဒေသ၊ ထိုးဖေါက်ရေး၊ တည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်များ။ နားထဲ၌ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်မိသွားသည်၊ သဲသောင်ပြင်ပေါ်၌ နှစ်ယောက်သား ထိုင်နေရာမှ ထလိုက်ပြီး မြစ်ပြင်ထဲသို့ ခဲနှင့်စိတ်ရှိလက်ရှိ အားကုန် လွှဲပေါက်ရင်း "ဒီကိစ္စ ငါ့ကိုနဲနဲပြန် ရှင်းပြစမ်းပါအုံး" တဟဲဟဲမြည်နေသော သံလွင်မြစ်ရေစီးသံကြား၌ အသံကိုမြှင့်ရင်း ကျနော်သူ့ကို ပြန်မေးမိသည်၊ သူက ရှင်းပြသည်၊"လူထုနဲ့ အတူတကွရှိပြီး လူထုနဲ့အတူ လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ရေးအပေါ်မှာ အခြေခံစဉ်းစားချက် ဖြစ်တယ်။ ဆွေးနွေးစရာတွေ အများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်" ကောင်းကင်သို့မော့ကြည့်မိသည် ကြယ်စင်များက တလက်လက်တောက်ပနေလျက်၊ ထိုစဉ် … ကြယ်တလုံး ကြွေကျသွားသည်ကို ကျနော့် စိတ်အစဉ်မှာ ဘာရယ်မဟုတ် နှမျှောတမ်းတစွာ ဖြစ်လိုက်မိသလို။
ကျနော်တို့ မာနယ်ပလောဌာနချုပ်သို့ ရောက်ခဲ့သည်၊ ခရီးရှည်ချီတက်ပွဲ ထိုခြောက်လအတွင်းက ကျနော်တို့ကို သင်္ခဏ်းစာအများကြီး ပေးသွားခဲ့သည်၊ အကြီးမားဆုံး သင်ခန်းစာ ထိုတခုက တိုင်းရင်းသားနယ်မြေအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် စစ်အစိုးရ ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်မှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများပင်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ထိုအတွေ့အကြုံများက စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မှသာလျှင် မုန်တိုင်းထန်နေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေသော ဘ၀များအတွက် ခိုင်မာသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်များကို ညွှန်ကြားပြသပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကျော် မာနယ်ပလော စစ်ပူစဉ်က ကျောင်းသားတပ်မတော် မာနယ်ပုလောဌာနချုပ်သို့ရောက်ပြီ … သားက … အမေနှင့် အဖေကို ရှာနေတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ကြရသည်၊ ဆက် လက် ပြီး တွေ့ရသည်က အလံတချောင်း၊ လူတယောက်၊ လောလောဆယ်တော့ မဲဆောက်မှာ … ခင်ဗျ။ အဲဒီမှာ အား လုံးရှိကြတယ် … ခင်ဗျ။ ထိုသို့ ဆိုရာ မဲဆောက်သို့ အပြေး အလွှား ခရီးရှည်ချီတက်ရပြန်ပြီ တွေ့ရသည်မှာကား အထက် အောက် စုန်ချီတက်ချီရှိနေသော ကျနော်တို့ရဲဘော်များ။ စစ်ပူသည့်ကာလ။ ရန်သူက ကျနော်တို့ရှိသည် ထင်သမျှ နေရာ မဲမဲမြင်လျှင် ထိုးစစ်ဆင်နေစဉ်ကာလ မဲဆောက်ဌာနချူပ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရုံးစိုက်ရာ တိုက်ထပ်ကြီးဆီသို့ ရောက် သွားခဲ့ကြသည်၊ အထုပ်ကလေးများ ကိုယ်စီကိုယ် စီနှင့် ယောင်ချာချာဖြစ်နေသော တောင်ပေါ်သားများ၊ ကျနော်တို့ကို ဖိတ်ကြားခဲ့သော စည်းရုံးရေမှူးကို ရှာဖွေ ကြည့်နေဆဲ၊ ပါလာသည့် အထုပ်ကလေးကို အိမ်သာဘေးနား ခင်းထားသော မျက်ဖျာပေါ်၌ ခဏချထားလိုက်သည်၊ ဗိုက်ကလည်း ဆာလှပေါ့၊ လူတွေက ပျား ပန်းခပ်မျှ၊ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ထိုပျားများကား အဆိပ်ရှိသော ပျားများဟု ယခင်က ကျနော် သတိမထား မိခဲ့ချေ၊ စစ်သားဆိုသည်မှာ ခြေထောက်နှင့် မချီတက်၊ ဗိုက်နှင့် ချီတက်သည်ဟူသော စကားအရ စားဖိုဆောင်သို့သာ တန်းတန်း မတ်မတ် ခြေဦးတည်မိသွား လေတော့သည်။
"တန်းစီပါကြမောင်ရင်တို့၊ မလောကြပါနဲ့၊ ဒီမိုကရေစီရကြမှာပါ" ဟု ရွှတ်နောက်နောက်နှင့် အသားအရည် ညိုရင့်ရင့် ရုပ်အသွင်သဏ္ဍာန်ကို မြင်လိုက်မိသည်၊ တိုက်အောက်ထပ်၌စားဖိုမှူး၏ စကားသံ လဲ့လဲ့လွင့်ပျံ့လာသည်၊ ကျနော်တို့က ဗိုက်ဆာလှပြီ၊ ဆွဲယူလာသော ပန်းကန်တချပ်နှင့် ခံလိုက်သည်၊ ရလာသည်ကား ဘဲဥပြုတ်တလုံး၊ ဟင်းဝေနေသော သူ၏ မျက်နှာကို ဖြတ်ကနဲကြည့်မိလိုက်သည်၊ ဗြုတ်ထနေသောမျက်နှာ၊ တနေရာမှာ မြင်ဖူးသလိုလို၊ ပြီးမှ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော် တယောက်၏ အသံကိုကြားလိုက်ရသည်၊ "ကိုမွန်းအောင် … ဟင်း အရည်လေးများ ထပ်ထည့်ပေးလို့ ရနိုင်မလား… ဗျာ"၊ ထိုစဉ်မှ အစပြု၍ ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်သားများ ပြန်ဆုံမိကြသည်၊ ကိုမွန်းအောင်၊ ကျနော်၊ သူ၊ သူဆိုသည်မှာ ဆန်းလင်း၊ ကိုမွန်းအောင်ဆိုသည်မှာလည်း ၁၉၈၈ ကာလများတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် နံမည်ကျော် စတီရီယို အဆိုတော် မြစ်ကြီးနားသား၊ ၈ မျဉ်းစောင်း ၈၂ အင်းလျားဖြင့် လူသိများလာပြီး "လွမ်းရတဲ့ ညတွေလွန်ပါစေ"ဆိုသည့် စီးရီး အလွန်နံမည်ကြီးနေချိန် စွန့်လွှတ်ခြင်းတွေဖြင့် တိုင်းပြည်မျက်နှာသာငဲ့၍ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ ယခုထက်တိုင် ပြည်သူ့အတွက် လွတ်မြောက်ရေးတေးသီနေသည့် ကချင်တေးဆို ဌက်ကြီး။
ထိုစဉ်ကာလက စခန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးကိုင်နေသူ … ဆန်လင်း၊ ရောက်ခါစ တပ်ရင်းနာမည်များ မတွင်ကျယ်ကြသေး စခန်းဟုသာပို၍ လူသိများသည်၊ စောထစခန်း၊ သေ့ဘောဘိုးစခန်း၊ ၀မ်းခါစခန်း၊ ရေကျော်စခန်း၊ မင်းသမီးစခန်း၊ သံလွင်စခန်း၊ မိုးတောင်စခန်း စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့ စခန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ထိုစခန်းကော်မတီများမှ စီမံခန့်ခွဲနေသည်၊ စခန်းများ၏ ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စမှန်သမျှ စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်သည် သူ့ တာဝန်၊ သူ … ကိုဆန်းလင်းက အမေက ကချင်၊ အဖေကအိန္ဒိယလူမျိုး၊ ကျနော်က ကချင်ပြည်နယ်မှ ဒေသခံတယောက်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ မိတ်မဆက်ဘဲ ရင်းနှီးသွားရသူများထဲတွင် သူတယောက်အပါအ၀င်၊ အပြုံးချိုချိုနှင့် စတတ်နောက် တတ်ပျော်ရွှင်တတ်ခြင်းများကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါ များလှသည်၊ ကျနော်၏ အရင်းအနှီးဆုံးများထဲတွင် သူတယောက်က ထိပ်ဆုံးက အမြင်တူ အတွေးတူများ ဖြစ်ကြသဖြင့် ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်ကဲ့သို့ ပြောမနာဆိုမနာ များ သူပြောနေသော စကားလေးတခုက ယခုထက်ထိ ရင်ထဲမှာ စွဲတသသ ကျန်နေဆဲ မှတ်မိနေဆဲ။
နိုင်ငံရေးသမားများအား ပြောတတ်သည်မှာ "ဒို့က တော်လှန်မြေအခြေစိုက်၊ သူတို့က ဘန်ကောက်အခြေစိုက်" တဲ့လေ။
ထိုစဉ်ကာလ နုနယ်စဉ်ကာလ၊ တော်လှန်ရေး၏ လေးဘက်တွား နေရသောကာလ၊ အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်၊ အတွေ့အကြုံသစ်များကို စုစည်း၊သိမ်းကြုံးယူငင်နေဆဲ၊ လေ့လာစရာများက တပုံတပင်၊ တော်လှန်ရေး အဘိဓမ္မာ၊ တော်လှန်စာပေ၊ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ စာပေများကို ရသမျှ အငမ်းမရ ဖတ်ရှုလေ့လာ မှတ်သားနေရသော အချိန်။ အရာရာအားလုံးသည် အသစ်အဆန်းများသည်သာ၊ နိုင်ငံရေးအခံဖြင့် ဘာကိုမျှ ကောင်းကောင်း မမြင်နိုင်ကြသေးသဖြင့် လေးဘက်တွားသော ကာလဟု ခေါ်ဆိုမိသည်၊ နုစဉ်ကာလ၌ ခိုင်မာသည့်။ ရင့်ကျက်သည့် လူထုအတွေးအခေါ်တခုကို ရလိုက်သည့်အတွက် သူ့ကို အံ့သြသွားရခြင်းဖြစ်သည်၊ အံ့သြခြင်းနှင့်အတူ အယူအဆ ရင့်ကျက်ခိုင်မာမှုအပေါ် ထိုစဉ်ကတည်းက ကျနော်သူ့အပေါ် အထင်ကြီးလေးစားခဲ့သည်။
ပကာသန မမက် ဖြစ်သလိုနေ၊ ဖြစ်သလိုစား၊ ဖြစ်သလိုဝတ်တတ်သော ကျနော်၏ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းသည် အယူအဆရေးရာ အတွေး အခေါ်ကြိုးဝိုင်း၌သူ၏ ဆွေးနွေးမှုများက ချွန်ချွန်စူးစူး၊ ရဲရဲမြမြ၊ ဆွေးနွေးလိုက်တိုင်း လည်ဆံမွေးတထောင်ထောင်၊ မာန်တဖီဖီဆွေး နွေးမှုမျိုး၊ အနေအထိုင် ကပိုကယိုရှိသော်လည်း သူ၏ ဦးနှောက်ထဲ၌ ရှိနေသော အတွေးအခေါ်နှင့် ခံယူချက်သည်ကား ကျစ်လစ်သိပ် သည်းခိုင်မာသည်၊ လူက သေးသွယ်သော်လည်း လက်တွေ့နှင့် သဘောတရားပေါင်းစပ်ရာ၌ ကြီးမာသူ၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် စစ် မြေပြင်နေရာကိုသာ တမ်းတသူ၊ မွေ့ပျော်သူ၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနှင့် လူထုတိုက်ပွဲကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ယုံကြည်ခဲ့သူ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် ညီလာခံတိုင်း၌ တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်ဆွေးနွေးတိုင်း ကျနော်နှင့်သူ အတွဲညီလှသည်၊ မကဒတ သမိုင်းကလည်း တိုက်ပွဲသဏ္ဏာန်သမိုင်း၊ တချို့ကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ၊ တချို့က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီလေ …… ဟုတ်စ။
၁၉၉၂ ယာယီမုန်တိုင်းထန်သော ကာလအတွင်း တည်ငြိမ်စွာပင် စစ်ကြောင်းများဖွဲ့ကြသည်၊ ထိုသည်မှာ အခြေခံဒေသ ထိုးဖေါက် ရေးစစ်ကြောင်းများ၊ ရှေ့တန်းနယ်မြေများ၌ ခြေကုတ်ယူ၍ မိမိတို့ အခြေခံဒေသများကို ခက်ခက်ခဲခဲ ထိုးဖေါက်ရသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်၊ ထိုအတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်နိဂုံးချုပ်သုံးသပ်ယင်း ရှေ့တဆင့်တိုးကာ ထိုမှတဆင့် အခြေခံဒေသ ထိုးဖေါက်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်များ၊ လူထုစည်းရုံးရေး လမ်းညွန်နှင့် ဘာသာရပ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရပေသည်၊ လူထုအခြေခံဒေသ ဖေါ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းကို လူထုစည်းရုံးရေး လမ်းညွှန်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ကြပေသည်။
ထိုသို့ပေါင်းစပ်ရာ၌ တပ်ဦး၏ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကို ဦးဆောင်ချမှတ် ပေးခဲ့သူများ အနက် သူတဦးသည်လည်း ရှေ့မှ ပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့သည် ဆိုသည့်အချက်ကိုမူ မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်၊ လွန်ခဲ့သော အချိန်ကာလ သံလွင်မြစ်ကမ်းနဘေး သူပြောခဲ့ သော စကားများက လက်တွေ့တော်လှန်ရေးနှင့် ဟပ်စပ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် သူကိုပို၍ လေးစားခဲ့သည်၊ သူသည် ကျနော်အတွက်တော့ ဟော့ဒီ ရင်ဘတ်ထဲက ရဲဘော်ကြီး၊ ကျနော်ကို အလင်းတံခါး ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့သူ။ အတွေးအခေါ်အရ ဦးဆောင်နိုင်သူ။
"ဒို့ လူထုရှိရာကို သွားရမယ်"
ဒေါင်းဂွင်ရှိစဉ် သူ၏ စောထစခန်းလေးသို့ ကျနော်မကြာမကြာ ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ စောထစခန်းလေးက သံလွင်မြစ်ကမ်းနဘေး တနေရာ၌ တည်ရှိသည်၊ ကုန်းမြင့်လေးပေါ်တွင် တည်ရှိသောထိုစောထစခန်းသို့ ရောက်သွားတိုင်းသူသည် သူ၏ရဲဘော်များနှင့် အတူတူ စလား, နောက်လားနှင့် ရင်းနှီးဖေါ်ရွေစွာ ရှိနေတတ်သည်၊ သူသည်နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် သဘောတရားများကို တသားတည်းဖြတ်သန်း၍ ညီအကိုမောင်နှစ်မများသဖွယ်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့် သင်ကြားသွန်သင် ပေးနိုင်ခဲ့သည်၊ စားရင်းလည်း သင်သည်၊ နေရင်းလည်း သင်သည်၊ သွားရင်းလည်း သင်နေသူ၊ သူ၏ ရဲဘော်များကလည်း သူနှင့် အလွန်အဟပ် အစပ်မိသည်၊ ရဲဘော်များနှင့်လည်း ကျနော်က တသားတည်း။။ ရဲဘော်များ၏ ဆိုးသမျှ ပေသမျှဒါဏ်ကို အလွန်သည်းခံ နိုင်ရှာသူ၊ မိမိ၏ ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ သဘောထားသဖြင့် ရဲဘော်များကလည်း သူ့ကို အလွန်လေးစား ချစ်ခင် ယုံကြည်ခဲ့သည်မှာ ကျနော့်ဘ၀ တသက်တာ မေ့မရနိုင့်ခဲ့ပါ၊ ချစ်ကြောက်၊ ရိုသေသည်ထက် ချစ်ခင် လေးစား ရိုသေသည်က ရှေ့တန်းလို နေရာမျိုးမှာ စောထရဲဘော်များက အခြား မကဒတ တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များနည်းတူ ပိုသည်သာပိုမည် လိုသည် မရှိခဲ့ပါ၊
အခြေခံလူတန်းစားများမှ ပေါက်ပွားခဲ့သော သူ၏ ရဲဘော်များသည် ရှေ့တန်းလိုနေရာမျိူး၌ သူပေးခဲ့သော လူထုတာဝန်အတွက် အသက်ပေးဆပ် သွားခဲ့သူများက ဒုနဲ့ဒေး၊ စစ်မှန်သည့် တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် တရပ်ဖြစ်သော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနှင့် လူထုတိုက်ပွဲ ပေါင်းစပ်ရေးအတွက် အနစ်နာခံကိုယ်ကျိုးစွန့် သွားသူများကလည်း တပုံတပင်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ ၂၀ရာစု မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားများ ခေတ်သစ် ရာဇ၀င်သာတည်း။
သူသည် လေ့လာရေးကို အင်မတန်မှ ခုံမင်သူတဦးဖြစ်သည်၊ သူ၏ဘေး၌ စစ်ရေးခြောက်စောင် ဘုတ်အုပ်ကြီးသည် သူနဲ့မကွဲမကွာ အတူရှိလျှက်။ သူလေ့လာသကဲ့သို့ ရဲဘော်များကိုလည်း လေ့လာခိုင်းသည်။ တော်လှန်ရေးတွင် လေ့လာရေးသည် အသက်တမျှအရေးကြီးသည်၊ လေ့လာမှု မရှိလျှင် ခေါင်းထဲ၌ ဘာအချက်အလက်မျှ မရှိနိုင်။ ရန်သူက ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လိုနည်းနှင့် လူထုကိုဖိနှိပ်နေသနည်း။ လူထု၏ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများ မည်သို့မည်ပုံ ရှိနေသနည်း၊ စာတွေ့ လက်တွေ့ သိရှိနိုင်ရမည်၊ ကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်များတွင် မည်ကဲ့သို့တော်လှန်၍ မည်သို့အနိုင်ယူ သွားခဲ့ကြသနည်း၊ တိုင်းပြည်အတွင်း ဘက်ပေါင်းစုံမည်သို့ မည်ပုံရှိနေသနည်း။ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် လေ့လာရေးစင်မြင့်ပေါ်သို့ မြင့်မြင့်တက်ခြင်းသည် တော်လှန်ရေးသမား၏ အရေးကြီးဆုံး တာဝန်တရပ်ဖြစ်သည်၊ ထိုအတွက် သူက သူ့ရဲဘော်များကို လေ့လာခိုင်းသည်၊ ဖတ်ခိုင်း မှတ်ခိုင်းသည်။ လေ့လာရေးလုပ်ရန် အမြဲတမ်း တွန်းအားပေးလေ့ရှိသည်၊ မရရသည့်နည်းနှင့် စာအုပ်များကို ဂျောင်ကြိုဂျောင်ကြားကနေ ရှာလာကာ ရဲဘော်များကို ပေးဖတ်သည်၊ ဒါ …. သူ့ရင်မှ စေတနာ အသီးအပွင့်များသာ …. ။
ဆိုးသည်ထက် နွဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော တော်လှန်ရေးဘ၀ မှတ်တမ်းလေးများမှာ ထူးခြားသည့် အတွေ့အကြုံလေးများက ကျနော့် အတွက်မမေ့နိုင်စရာ တခုတ်တရ ဖြစ်စေခဲ့သည်သာ များသာ။
မှတ်မှတ်ရရ ရဲဘော်လေးတဦး … သူသည်သူ၏ ကျောင်းသားတပ်မှူးစကားကို မြေ၀ယ်မကျ လေးစားလိုက်နာသူ၊ သူသည် အနုပဋိ လောမကို သဲကြီးမဲကြီးဖတ်သည်။။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို အထူးလေ့လာသည်၊ အဘိဓမ္မာလေးစောင်ကို မှတ်သည်၊ ဖတ်သည်၊ တရက်သူနှင့်ကျနော်တွေ့ဖြစ်ရာ ဆွေးနွေးဘက်တဦး ရောက်လာသဖြင့်သူကပျော်နေ သလိုပင်၊ သူသည် စာဖတ်နာသူတဦးကဲ့သို့ပင် ဆွေးနွေး လာနိုင်သည်ဟု ကျနော်က ပကတိထင်မြင်နေမိသည် ကျနော်ကစစ်ရေးခြောက်စောင်ကို ဆွေးနွေးတော့ မည်လား၊ အနုပဋိလောမ ရုပ်ဝါဒကိုပဲ လှန်တော့မည်လား၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ အဆီအနှစ်တွေကိုပဲ ရှင်းပြရတော့မည်လား၊ ငံ့လင့်နေမိသည်၊ သို့သော်သူ၏ ဆွေး နွေးချက်ကို ကျနော်အံ့အားသင့်သွားသည်၊ သူ၏ ဆွေးနွေးချက်က ဤကဲ့သို့မျှသာ "အကို ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာတဲ့၊ ဒုတိယ အရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာဗျ၊ တတိယအရွယ် ရောက်ရင် တရားရှာရမယ်လေ၊ ကျနော့်အရွယ်က ဒုတိယအရွယ်ရောက်နေပြီဗျ"၊ ကျနော်က စကားဖြတ်၍ တော်လှန်ရေးသမားဘ၀နဲ့ တော်လှန်ရေးအလုပ်လုပ်ရင်း လူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းသည် မွန်မြတ်သည့်ဘ၀ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုရာ ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူ့ကို ပြန်လည်ရှင်းပြရာ တဆက်တည်းမှာပင် "လူထုကို ငါ့ညီ ဘယ်လိုအလုပ် အကျွေးပြုမလဲ" ဟု ဖြတ်မေးရာ "ဆိုက်ကားနင်းရင်း အလုပ် အကျွေးပြုတော့မယ်အကို"ဟုဆိုကာ ထိုရဲဘော်လေးသည် ထိုအတွေး အခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်။ ကျနော့် ရဲဘော်ကြီးဆန်းလင်းသည် တဦးချင်းစီ ဖြစ်တည်နေ သော စံလွဲအတွေးအခေါ်များကို တည့်မတ် ဆွေးနွေးပေးနိုင်သည့် အချိန် သူ့မှာလုံလောက်စွာ မရရှိခဲ့ချေ၊ လေ့လာသည်ဆိုရာ၌ နိုင်ငံ ရေးအခံမရှိ နိုင်ငံရေးစံတခုမရှိလျှင် လေ့လာမှတ်သားသည့် ၀ါဒီ အစ်ဇင်များ၊ တွေးခေါ်မှု ဖလော်ဆော်ဖီများကို ချိန်ထိုး၍ ဝေဖန်ပိုင်း ခြားနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်ချေ၊ နိုင်ငံရေး ရင်ကျက်မှုဆိုသည်မှာ တထိုင်တည်းဖတ်ရူမှတ်သားရုံမျှ မရနိုင်၊ အချိန်ကာလများဖြင့် တိုက်စားဖြတ် သန်းသော အတွေ့အကြုံများကသာ ရင့်ကျက်မှုကို စေစားနိုင်သည်၊ ကျနော်ရဲ့ ရဲဘော်ကြီး၏ စေတနာသည်ကား သူ့ ရဲဘော်များကို အတွေးအခေါ်ရ ခိုင်မာသည့် ရဲဘော်များအဖြစ် ထိုစဉ်ကတည်းကစ၍ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ကျိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
နောက်တန်းတွင် ဖြစ်သလို နေတတ်ထိုင်တတ်ကြသော ရဲဘော်များ၊ နောက်တန်းအမိန့်များကို ကပိုကရို လုပ်တတ်သော ရဲဘော်များကို ကျနော်တွေ့ဖူးသည်၊ ကြုံရဖူးသည်၊ လူဆိုသည်ကား လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လိုတတ်သော သတ္တ၀ါ၊ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကြီးမားသောကြောင့် ထိုပန်းတိုင်အရ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များက သူတို့အတွက် ထောင်းတာလှသည်၊
"နောက်တန်းစခန်းထဲ၌ အရက်မသောက်ရ" အမိန့်ထုတ်သည်၊ နောက်တန်းစခန်းထဲတော့ သူတို့ လုံးဝမသောက် သူတို့သောက်သော နေရာသည်ကား စခန်း၏ ပြင်ပ စခန်းကို ကာရံ ၀န်းရံထားသော စည်းဝိုင်း ခြံစည်းရိုး အပြင်၌ ကျောခြင်းကပ်၍ အပြင်ဘက်ဘေးတွင် ၀ိုင်းဖွဲ့နေကြသည်ကို မြင်ရဖူးသည်၊ ဟုတ်သည်၊ မှန်သည်၊တပ်စည်းဝိုင်းအတွင်း၌ မမှီဝဲ တပ်အပြင်၌ သာမှီဝဲသုံးဆောင်သည်၊ ၀ိနည်းလွတ်ဖြစ်သည် သို့သော် သူတို့သည် လူဆိုးလူပေများမဟုတ်ကြ၊ ငယ်သူများမို့သာ သို့ရာတွင် နောက်တန်းယဉ်ကျေးမှုအရ ကပိုကရိုနေထိုင်မည် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာများ၌မူကား အလုပ်ကိုလေးစားသည်၊ တာဝန်များကို ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်သည်၊ အသက်ကို စွန့်လွှတ် တိုက်ပွဲဝင်ကြသည်၊ ရန်သူ၏ နောက်တန်း အခြေစိုက်တပ်စခန်းအတွင်း အထိကို ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်၍ တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးသည်။ ထိုတပ်အတွင်း၌ပင် စောထစခန်းမှ မကဒတ ကျောင်းသားတပ်ခွဲမှူးတဦးကျဆုံးခဲ့သည်၊ ထိုတပ်အတွင်း၌ ကျဆုံးသွားသော တပ်ခွဲမှူးကျောင်းသားရဲဘော်ကို မြေမြုပ်နှံသည့်အခါ ရန်သူတပ်မှူးကပင်လျှင် ဂုဏ်ယူအလေးပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်၊ ဤမျှလောက် သတ္တိရှိရှိ တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ရန်သူ၏လေးစားမှုကို ခံခဲ့ရခြင်းကို ထိုစခန်းရှိ မကဒတရဲဘော်များက အသက်ပေး၍ပြသခဲ့ကြသည်။
သူသည်ရှေ့တန်းက ပြန်ရောက်လာတိုင်း ကျနော်ရှိရာသို့ မကြာခဏ ရောက်လာတတ်သည်၊ ကျနော်သည် သူ၏ ရှေ့တန်းအတွေ့အကြုံများကို ကျနော့်အား လိုလိုလားလား ရှင်းပြလေ့ရှိသည်၊ ရှေ့လုပ်မည့် အနာဂါတ် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လည်း အကြံဥာဏ်ဖလှယ်ကြ၊ ဝေဖန်ကြသည်၊ နှီးနှောကြသည်၊ ကျနော့်၏ အကျင့်က သူများ၏ အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာများအား နားထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ သူ၏ နေရာမှာ ကျနော်ဆိုလျှင် မည်ကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖေါ်မည် သို့မဟုတ် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မည် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမည်နည်း၊ စဉ်းစားသုံးသပ်လေ့ရှိခြင်းပင်၊ သူသည် လူထုစည်းရုံရေးမှူးကောင်းတယောက်၊ အနာဂါတ်အတွက် တောက်ပြောင်လာမည့် ကြယ်တပွင့်၊ ရည်မှန်းချက်အင်မတန်မှ ကြီးမားသူ လူထုလူမြောက်ရေးအတွက် လူထုအားစည်းရုံးနိုင်ရေး အခြေခံဒေသခိုင်မာရေး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို အခြေခံကာ လူထုကိုစည်းရုံး၊ ကျေးရွာကို အခြေခံ၊ မြို့ပြကို ထိုးဖေါက်ဒီလို သူက၊ သူသည် ကျေးရွာအတွင်း လူထုများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဒူးတိုက်သည်၊ မြို့နေလူထု လူတန်းစားနှင့်ထိတွေ့သည်၊ ရန်သူကို ဘက်ပေါင်းစုံ လေ့လာသည်၊ မိမိရဲဘော်များ၏ အထွေထွေ ကိစ္စရပ်များကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ ပြုစုဆောင်ရွက်သည်၊ မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ကိစ္စများ ခေါင်းထဲတွင် ဦးလည်မသုန် အစီအရီရှိနေတတ်သည်၊ ဝေဖန်ငြင်းခုန် ဆွေးနွေးအဖြေရှာ လေ့ ရှိသည်။
ဤသို့နှင့်ရှေ့တန်းတွင်သာ လူထုလုပ်ငန်းနှင့် ပျော်မွေ့နေတတ်သော ကျနော်၏ သူငယ်ချင်းကြီးသည် ၁၉၉၃ခန့် တွင် နောက်တကြိမ်ကျနော် တောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာတော့ တွေ့ကြပြန်သည့် ထိုအခါ သူ့ရုပ်သွင်ကို ကျနော်က စူးနစ်စွာကြည့်နေမိသည်၊ သူသည် ချေဂွေဗားရား ပုံစံပေါက်လာသည် နှုတ်ခမ်းမွေး မုတ်ဆိတ်မွှေးများက ထူလပြစ်နှင့် မသပ်ခပ်အား ထူးခြားသည်က ဆေးအိုးတံတလုံးကို ပါးစပ်တွင်ကိုက်၍ မီးညှိလိုက်ဖွာလိုက်နှင့် သူစရိုက်တခုမှာမူ ရောက်လာတိုင်း တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့် လုပ်လေ့ရှိပြီး ကျနော်ဆီမှ သူလိုခြင်သည့်ဟာများတွေ့ပါက ဆွဲယူသွားသည် မှာသူ့အကျင့်၊ သူ့ဝသီ ရှေ့တန်းတွင် ပင်ပင်ပမ်းပမ်းရှိသော ကျနော်၏ သူငယ်ချင်းအတွက် ကျနော်ကလည်း မငြိုငြင်မိချေ။
ယခုတွင်လည်း ကျနော်နားထောင်နေသည့် ရေဒီယိုတလုံးကို ရချင်သည်ဟုဆိုလာပြန်သည်၊ ရှားရှားပါးပါး ရထားသော ရေဒီယိုတလုံးသည် သူ့အတွက်ဆိုလျှင် ကျနော်မငြင်းနိုင်ရှာ၊ ဆေးတံဖွာရင်း မျက်လုံးကိုမှေးကာ ရှေ့တန်း အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းပြနေပြန်သည်၊ ကျနော်က နားထောင်သမားသက်သက် ပြည်တွင်းသို့ မည်ကဲ့သို့မည်ပုံ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မည်သို့ရုပ်ဖျက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရန်သူနှင့် မည်သို့ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ၍ မည်သို့လှည့်ဖျားခဲ့ရကြောင်း၊ သူရှင်းပြခဲ့သော ထိုအကြောင်းဤအကြောင်းများသည် ကျနော့်အတွက်၊ တော်လှန်ရေးအတွက်၊ မိခင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကြီးမားသော အတွေ့အကြုံများပင်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား ဒါ .. ဟောလီးဝုဒ်က ရိုက်သည့် ဇာတ်လမ်းတပုဒ် မဟုတ် သူက လူထုလမ်းစဉ်၊ လူထုအာဏာကို စွဲမြဲစွာ ကိုင်စွဲထားသဖြင့် လူထုအပေါ်၌ ယုံကြည်မှုကြီးမားကာ ပျော်ဝင်ခြင်းသက်သက်၊ လူထုသည် ရေ၊ တော်လှန်ရေးသမားသည် ငါး ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်ပေါ်အခြေခံ၍ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူ။
ထိုရက်က ကျနော့်ကို ဆွေးနွေးလာသည် သူမြို့တွင်းသို့ ပြန်၍ ၀င်ရောက် ထိုးဖေါက်စည်းရုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း။ အစီအစဉ် များက မည်သို့ဖြစ်ကြောင်း ကျနော့်အား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖွင့်ထုတ်တိုင်ပင်လာသည်၊ သူမြို့ကိုဝင်သည့်အကြိမ် စိပ်လာမိကြောင်း ကျနော် သတိထားမိသည်၊ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာသောကျနော်က ဤကဲ့သို့ အကြံပေးမိသည်၊ လူထုစည်းရုံးရာတွင် အဓိက တပ်ဦးမကျွံရေးနှင့် လူထုနောက်မြီးဆွဲမဖြစ်ရေးကို ရှင်းပြတော့ သူက လေးနက်စွာစဉ်းစားတွေးနေသည်၊ ကျနော်က ဆက်လက်၍ လူထုအဆင်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့အခါ အတင်းထိုးပြီးဆွဲခေါ်ရင် ဆင်ကန်းတောတိုးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကြီးပဲကျန်ပြီး လူထ နောက်ချန်နေခဲ့ လိမ့်မယ်၊ လူထုရဲ့ရေချိန်၊ ရန်သူအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကိုကြည့်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ချ လုပ်ရမယ်၊ နောက်တခု အရေးကြီးတာက လူထုနောက်မြီးဆွဲမဖြစ်ရေးဘဲ ဆိုလိုတာက လူထုပြောသမျှ လူထုခိုင်းသမျှ လူထုနောက်ကနေ တရွတ်တိုက်မလိုက်မိဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောတော့ သူက ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ကာ ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေခဲ့သည်၊ တခုလုံး အတိုင်းအတာရ လူထုကိုမှီခို၊ လူထုကြားမှာနေ၊ လူထုကိုလေးစားရမယ် ဒီအခြေခံပေါ်မှာ လူထုကို တစုံတခု အတိုင်းအတာရ ယုံကြည်ရမယ် ဒါပေမဲ့ တခုချင်း အတိုင်းအတာရ တော်လှန်ရေးသတိ အမြဲရှိနေရမယ်၊ အမြဲတမ်းသံသယကြီးဖို့တော့ မဟုတ်ဘူး တဦးချင်းဆီကို သတိထားနေရမယ် ဆိုတာကလည်း လူထုဆိုတာက အမျိုးမျိုးရှိတယ် ဥပမာကွာ … စီးပွားရေးအခြေခံပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သူတို့အတွေးအခေါ်ကလည်း ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဟု ဤကဲ့သို့ အကြံပေးတော့ သူကငြင်းချက်မထုတ်ခဲ့ ခါတိုင်းဆိုလျှင် ကျနော်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအခေါ်များကို ဖေါ်ထုတ်ရင်း အဖြေမှန်ကို မရ ရအောင်ရှာလေ့ရှိသူ။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အပေါ်တွင် သူမည်မျှ မာနကြီးကြောင်း ထိုရက်က သိလိုက်ရသည်၊ ထိုရက် တရက်----။ သူနှင့် ကျနော် မာနယ်ပလောသို့ ကိစ္စတခုဖြင့် သွားကြသည်၊ သူ့စခန်းမှနေ၍ စက်လှေကြုံဖြင့် လိုက်သွားကြရာ မယ်နယ်ပလောသို့ ရောက်သည်၊ ထိုစဉ် သူက ပျောက်ကျားယူနီဖေါင်းနှင့် ဦးထုပ်တော့မပါ မာနယ်ပလောရောက်တိုင်း ကျောင်းသားဘ၀က ပါလာသည့်အကျင့်က မပျောက် ထိုအကျင့်က လဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်သည့်အကျင့် "လာ … လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မယ် ကွာ" ဟုဆိုသဖြင့် "ဘယ်ဆိုင်ထိုင်မှာလဲ" ဟုကျနော်က မေးသည် ထိုစဉ်က မာနယ်ပလောတွင် လဘက်ရည်ဆိုင် သုံးလေးဆိုင် ရှိသည်၊ "ဟိုဘက်ကွာ" အန်အယ်လ်ဒီဘက်သွားရင်း ကဗျာဆရာပန်းခက်ဆိုင်မှာ ထိုင်ရအောင်ဟု ဆိုလာသည်၊ ကျနော်က မငြင်းမိ၊ ချစ်သူငယ်ချင်း သွားရာနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်လေ့ရှိသူ မိတ်ဆွေများကို သံယောဇဉ်ကြီးသူ ချိုစိမ့်မရှိ၊ ဖန်ချိုမရှိ သောဆိုင်၌ သူနှင့်ကျနော် ကော်ဖီမှာသောက်ကြသည်၊ ထုံးစံအတိုင်း သူ၏ စိတ်အစဉ်တွင် လွှမ်းမိုးနေသော လူထုစည်းရုံရေး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဘ၀အကြောင်းများကိုသာ ကျနော့်ကို တတွင်တွင် ပြောနေသည်၊ ထိုစဉ်က ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးက ပူပူနွေးနွေးပြီးခါစ တောခိုလာသည့် ကျောင်းသားများ ကလည်း လက်နက်ဖြင့် လူအင်အားဖြင့် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပြီး အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲရရန် စိတ်အားထက်သက် နေကြသည့်အချိန် တော်လှန်ရေးကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်းပြီးမည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်၊ တိုက်ခိုက်ရေး စိတ်ဓါတ်အရှိန်အဟုန် မြင့်မားနေသည့်အချိန်၊ ထိုစဉ် ပြည်တွင်းပါတီတခုမှ တောခိုလာသည့် ကျောင်းသားသုံးဦး လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာကြသည်၊ ကျနော်တို့၏ လက်မောင်း၌ တပ်ထားသော ဘက်တံဆိပ်ကိုကြည့်ကာ သူတို့ကို သူတို့ မိတ်ဆက်ပြီး ကျနော်တို့ ၀ိုင်းထဲသို့ ပူးပေါင်းလာကြသည်၊ ကျနော်တို့ ကလည်းသူတို့ကို လေးစားစွာ ဖိတ်မန္တကပြုသည်၊ ကျနော့် သူငယ်ချင်းက သူတို့ကို အကဲခတ်လေ့လာနေသည်၊ စကားသံများက တိတ်ဆိတ်လျှက် ထိုအရပ်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် ထိုပါတီလူငယ်က စကားစလာသည်၊ ကျနော်တို့ ဆိတ်ငြိမ်စွာ နားထောင်နေကြသည်၊ ထိုလူငယ်က ပြည်တွင်းတွင် သူ မည်သို့မည်ပုံ ထိုးဖေါက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း၊ ပါတီကို လူဦးရေများများရအောင်မည်ကဲ့သို့ကြံဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပါတီအတွေ့အကြုံများကို အာဘောင် အာရင်းသန်သန်ဖြင့် ကျနော်တို့ကို ရှင်းပြလာသည်၊ ကျနော်နှင့် သူကလည်း အတွေ့အကြုံယူနေကြသည်၊ စကားဝိုင်းက အချိန်ကြာလာသည်၊
သူလည်းအရှိန်တော်တော်ရလာသည်၊ ပြောပါများသဖြင့် ပါးစပ်ကအမြုပ်တစီစီဖြစ်တော့ မလိုလို ဘယ်လိုလုပ်သည်ထက် သူက သူများထက်ဘယ်လိုပိုလုပ် နိုင်ကြောင်းကို ကြွားလုံး ထေ့လုံး သန်သန်ဖြင့်ပြောလာသည်၊ သူကဘယ်လိုချလိုက်ကြောင်း။ သူ့ကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်သွား ကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြောလာတော့ ကျနော်က နားကြားပြင်း ကပ်ချင်ချင်ဖြစ်လာသည်၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို ကြည့်တော့ သူ စိတ်အချဉ်ပေါက်နေပုံရသည်၊ ကျနော်၏ ပေါင်ကို သူက တချက်ကုတ်ပြီး အချက်ပြလိုက်သဖြင့် ကျနော် သတိထားမိလိုက်သည်၊ သူပြောတော့မည်၊ သူပြောမည့်စကားများကို ကျနော်က စောင့်စားယင်း အမြုပ်ထနေသော ထိုပါတီရဲဘော်လေးကို ကြည့်လိုက်စဉ် သူက … ခင်ဗျားပြောတာကောင်းပါတယ်၊ ဗဟုသုတရတာပေါ့ဗျာ … ခင်ဗျားတို့လိုတော မြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီ အတွေ့အကြုံကတော့ ကျနော်တို့အားနည်း ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ဟု အစချီက သူက ရေပက်အ၀င်မခံ ဆက်တိုက် ပြောလေတော့ ထိုပါတီလူငယ်လေးမှာ ပါးစပ် အဟောင်းသား သူပြောလိုက်သည်ကား သူတိုက်ခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများအကြောင်း မာနယ်ပလော ခံစစ်တိုက်ပွဲများအကြောင်း၊ မည်မျှအချိန် ကြာသည် မသိတော့နိုင် ကျနော်က သူ့ ပေါင်ကို ကုတ်လိုက်သည်၊ သူသည်ဂရုမစိုက် ပြောမြဲပြော ဟောမြဲဟော ဆဲပင် ကြာတော့ ထိုပါတီရဲဘော်များက ကုတ်ကုတ် နှင့် ထပြန်သွားတော့မှ သူက ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ကျနော့်အား ဟေ့ကောင် မင်းသိတယ်မဟုတ်လား ငါက သူတို့မလိုက်နိုင်တဲ့မမှီတဲ့ အာဂျင်ဒါနဲ့ ဆွေးနွေး လိုက်တာလေ၊ ဒီတော့ ၀င်ပြီးဆွေးနွေးလို့ မရတော့ဘူး သိပြီလား ပြောသည်ကို ကျနော်ကတော့ ကောင်းလေစွဟု ပြောယုံမှတပါး အခြားမရှိပါ၊ ကြည့်လေ … သူက အဲဒီလို မာကျောကျော ဂျွတ်ဆတ်ဆတ်၊ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ ခပ်စောင်းစောင်းလူမျိုး ထိုစဉ် ကျနော်က ထိုပါတီလူငယ်များကို အားနာမိနေသည်။
ဘန်ကောက်၌ ရဲအဖမ်းခံရစဉ် ကျနော်တို့အား နှစ်ယောက်တွဲလက်ထိပ်ခတ်၍ အိုင်တီစီ (လ.၀.က) အကျဉ်းစခန်း သို့အပို့ခံရသည်၊ ကျနော်၏ ရှေ့၌ရှိသော သူက ထိုင်းပုလိပ်ကို ဂျစ်ကန်ကန်မှုံတေတေနှင့် ကြည့်နေသဖြင့် ထိုပုလိပ်က သူ့ကိုကြည့်ရကောင်း မလားဆိုကာ လူအများကြား၌ ၀ါးလုံးထိုးပြေးလာပြီးသူကို ထိုးမည့်ဟန်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်သည်ကို သူကလည်း ပြန်ခံချရန်ပြင်ဆင်သည် အားလုံးက ပြောမှသူက ငြိမ်သွားသည်၊ အဲဒီလို ဆတ်ဆတ်အထိမခံ၊ အကြောမခံသည့် လူမျိုး၊ ထောင်ထဲတွင်လည်း ရဲက နာမည်မေးသည်၊ သူက သူနာမည်ကို "အဖေ" ဟုပြောသည်၊ ရဲကနာမည်ကို အကျယ်ကြီးအော်ခေါ်၍ အဖေ--အဖေ--အဖေ ဟုဆိုတော့ သူကမကြားခြင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့သည်၊ ဟေ့ကောင် မင်းပေးထားတဲ့နာမည် မဟုတ်လားမေးတော့ သူကြာကြာခေါ်နေရအောင် ငါမကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတာ ဟုဖြေကာ ကြာတော့မှ အဖေ … "ဟေ" ဆိုသော အာလုပ်သံဖြင့် အသံထွက်လာသဖြင့် အချုပ်ကား၌ ရောက်နေသော ကျနော်တို့ တသောသော တ၀ါးဝါးဖြင့် ပွဲကျခဲ့ရသည်၊ သူက အဲဒီလို ရွတ်သည်၊ရွဲ့သည်၊ဂျစ်သည် ထိုင်းပုလိပ်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့ ကျောင်းသားများက သိပ်ပြီးဂရုစိုက်လေ့မရှိ။။ မောင်ကျောင်းတို့၏ ဒါဏ်ကိုလည်းသူတို့ တော်တော် ခံရသည်၊
၁၉၉၄နောက်ပိုင်းကျနော်နှင့် သူမဆုံဖြစ်ကြတော့၊ မဆုံဖြစ်ကြသော်လည်း သူအကြောင်းကို မေးမြဲ၊ စုံစမ်းဆဲ၊ ရှေ့တန်းရောက်နေသည့်အကြောင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နေကြောင်းကိုသာ ပြန်၍ကြားရသည်၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိခဲ့ရ။ နောက်တော့ သူအဖမ်းခံရသည်ဟု ကြားလိုက်ရသည်၊ ထိုသတင်း ကိုကျနော်မယုံကြည်၊ သူ … ကျနော်နှင့်အတူ တော်လှန်ရေးမှာရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်နေဆဲ၊ ထိုသတင်းကြားစဉ်က ကျနော် နားထဲ သံရေပူတွေ ဖြတ်စီးဆင်းသွားသလိုခံစားမိလိုက်သည်၊ မဖြစ်ပါစေနဲ့ မဟုတ်ပါစေနဲ့ဟု အခါခါဆုတောင်းမိသည်၊ သတင်းက အမှန်ဖြစ်တော့ ကျနော်ယူကြုံးမရကြေကွဲရသည်၊ သူသည် ရှေ့တန်းသို့ လူထုစည်းရုံရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရွာစဉ်ရွာနှံ့အပင်ပန်းခံ၍ လှည့်လည်သွားလာကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ရွာသားတဦးကို ခေါ်ကာ သူ့ လုပ်ငန်း အတွက် လမ်းပြအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့ရာမှ ရွာသားစည်းပေါက်ကာ သတင်းပေးသဖြင့် သူသည် တောင်ငူအနီးနားရှိ ရွာတရွာတွင် အိမ်တအိမ်၌ နားနေစဉ် စစ်ခွေးများကို သူနေသည့်အိမ်ကို အင်အားအပြည့်နှင့် ပိတ်ဆို့လိုက်ကြောင်း သူ့တွင် ကိုင်နေကြ အေကေတလက်ပါသည်၊ သို့သော်သူခံမပစ်ခဲ့ ခံပစ်ပါက အိမ်တွင်ရှိနေသော မဆိုင်သူ မိသားစုများ အားလုံး သေနတ်ကျည်ဆံသင့် သေဆုံးကြမည့်အရေးကို သူသိသည်၊ ထို့ကြောင့် သူက ထိုနေရာမှလွတ်မြောက်ရန် အားထုတ်တော့သည်၊ ထိုအိမ်ပေါ်မှနေ၍ အိမ်အောက်သို့ခုန်ချသည်၊ ထိုစဉ်အောက်၌ ရှိသော ၀ဲစားခွေးတပ်က အိမ်အောက်တွင်ရှိသော လှည်းကိုထောက်သည့် လှည်းဒေါက်နှင့် သူ့ ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပြီး တောင်ငူထောင်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့သည်၊သူယုံကြည်သော သူ၏လမ်းမှာ သူကိုသစ္စာဖေါက်ကာ သူနေသည့်နေရာသို့ လက်ညှိုးထိုးပြခဲ့လေသည်၊ ထိုတောင်ငူ စစ်ကြောရေးစခန်းတွင် သူကို ဘ၀ပျက်အောင် နှိပ်စက်နည်းမျိုးစုံဖြင့် နှိပ်စက်ကြသည်၊ သူကိုစစ်ကြောရေးဝင်စဉ်သူသည် ဗမာစကားကို တလုံးမှပင်မပြောတော့၊ အင်္ဂလိပ်လိုသာပြောသည်၊ စစ်ကြောရေးဝင်သည့် ရဲဘော်များသည် အခက်တွေ့လာကာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သည့် ဗိုလ်မှူးတယောက်ကို ခေါ်၍ စစ်ကြောခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်၊ ထိုမျှပင် စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကျဉ်စွာ စစ်အစိုးရအား ရသလောက် အညှိုအငြင် ပေးသွားနိုင်သည့် ရင်ဘတ်ထဲက ရဲဘော်ကြီး ထိုအကျဉ်းစခန်းမှာပင်လျှင် ကျနော်၏ ရဲဘော်ကြီးကျဆုံးခဲ့ရသည်၊ သူသည် သူရဲကောင်းပီသစွာ ကျဆုံးခဲ့သည်၊ သူယုံကြည်သည့် လူထုကို အသက်နှင့်လဲ၍ ကာကွယ်ပေးခဲ့နိုင်သည်၊ သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ်နှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်တိုက်ပွဲ ၀င်သွားခဲ့သော ရဲဘော်ကြီးဆန်းလင်း ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
လာမဲ့နှစ် ၂၀၀၈ အတွက် မကဒတမှထုတ်ဝေသော ပြက္ခဒိန်ရသည်၊ ကျနော့် သူငယ်ချင်းသည် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကြား၌ ရောက်နေသည်၊ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကြားကို ကျော်ဖြတ်၍ ပိန်းပိတ်မဲမှောင်နေသော စနစ်များရှိရာ မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ စစ်အာဏာရှင်များကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန် ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်း၂၀၈၊ ၂၀၉၊ တပ်ရင်း ၂၁၀၊ ပါဝင်သော စစ်ကြောင်းများက ချီတက်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တော့မည်၊ အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းသူသည် ကျနော့်လွှမ်းမိုးနေဆဲ၊ သူသည် ကျနော် နှင့် အတူရှိနေဆဲ၊ ပြက္ခဒိန်ကို သေသေချာချာ ကျနော်ကြည့်တော့ သူ့ကကြည့်နေသည့်နှယ်၊ စေ့စေ့ကြည့်သည်၊ စူးစိုက်ကြည့်သည်၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်ယူနီဖေါင်းနှင့် သူ … ရီနေသည်၊ နောက် သူ …ပြုံးနေသည်၊ ပြီးတော့ …. ။ သူ့ ကာဘိုင်သေနတ် သည် မိုးပေါ်သို့ထောင်လျှက် … မောင်းတင်လျှက် …. ။ သူ့ ၀ိညာဉ်သည်လည်း …. ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီသို့ ဒေါင်းတင် မောင်းတင်လျှက် ……. ရှိနေမည်သာ။ ။
( ဆန်းလင်းနှင့် တပ်ရင်း(၂၁၀)မှ ရှေ့တန်းတနေရာတွင် ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်များနှင့် မကဒတရဲဘော်များ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုဦးညွတ် အလေးပြုလျှက်။ )
သားချစ် ( ဟစ်တိုင် )
Posted by ခြားနားသူ at 11:29 PM